Xaabsade: Waxaan ku faraxsanahay inaan kusoo noqdo Puntland (Dhageyso) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xaabsade: Waxaan ku faraxsanahay inaan kusoo noqdo Puntland (Dhageyso)
Mareeg.com: Siyaasiga Axmed Cabdi Xaabsade oo marar badan isu dhaafdhaafay maamulada Puntland iyo Somaliland oo shalay gaaray Garowe kadib markii uu ka baxsaday maamulka Somaliland ayaa ka hadlay ujeedka uu halkaas u tegay.
Xaabsade iyo xubno kale oo la socda oo Sabtitidii tegay degmada Galdogob ee gobolka ayaa shalay loo gudbiyey magaalada Garowe, waxaana halkaas Madaxwayne Ku Xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Camay, Wasiiro, Xildhibaano, Haween, Dhalinyaro iyo qaar kamid ah bulshada ku nool Magaalada Garoowe.
Soo dhaweynta kadib waxaa Xaabsade loo gudbiyey dhanka Madaxtooyada maamulka goboleedka Puntland, waxana halkaasi kusoo dhaweeyay Madaxwayne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay Imaanshaha Puntland ee siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade oo ka soo jeeda deegaanada Puntland.
‘’Waan ku faraxsanahay in gurigaagi hooyo, deegaankaagi dhabta ahaa, hoygaagi runta ahaa inaad noogu timaato marti cid ugama ihid gurigaagi rasmiga ahaa baa ku yaala ehelkaagi baa jooga waan kugu soo dhaweynaynaa’’ ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
‘’Axmed waa oday nagu soo biiray taladiisa aqoontiisa khibradiisa siyaasadeed inta waxay u tahay wanaag Puntland waxaan rajaynayaa wada shaqayn fiican‘’ ayuu hadalka raaciyay Madaxwayne Cabdiwali Gaas.
Siyaasi Axmed Cabdi Xaasbdade oo isna dhankiisa lahadlay Warfidyeenka ayaa sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan dib ugu soo laabashadiisa Puntland, isagoona tilmaamay in uu kamid ahaa Waxgaradkii gacanta weyn ka gaystay Aasaska iyo Jiritaanka Puntland.
Dhageyso Codka Axmed Cabdi Xaabsade
‘’Waxaan ku faraxsananahay inaan kusoo laabto Puntland oo aan horay aasaakeeda wax ugu lahaa, indoorana aan ka maqnaa, haatanna aan usoo laabtay inaan dib wax uga dhiso oo ka howlgalo, arrintaas ayaan u imid” ayuu yiri Axmed Cabdi Xaabsade.
“Waan idiin ballanqaadayaa inaan ka qeybgelayo, arrintaas madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa lahaa, oo iga codsaday inaan imaado oo la shaqeeyo, markii aan kazoo howlgabay Somaliland oo aan la shaqeeyey laakin aan hadda ka jeclaaday inaan teydii asliga ahaa wax ka qabto, marka dhibaato ma jirto, gurigeygii ayaan imid, dadkgeygii ayaana u imid” ayuu sidoo kale yiri Xaabsade.
Axmed Cabdi Xaabsade wuxuu kamid ahaa siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada SSC (Sool, Sanaag iyo Cayn) oo ka qayb galay dhismaha maamulka Somaliland sanadkii 1991kii kana sii tirsanaa ilaa 1997-kii.
1997-kii, waqtigaas oo lagu howlanaa dhismaha maamulka Puntland, Xaabsade iyo rag uu ku jiro waxay hadana usoo wareegeen dhanka Puntland isagoo sii joogey ilaa sanadkii 2007.
Dib ayuu hadana Somaliland ugu laabtay sanadkii 2007, kaddib markii ay isku dheceen madaxweynihii Puntland ee xilligaas Cadde Muuse. Xaabsade wuxuu waqtigaas ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Horumarinta Reer Miyiga ee Puntland.
Xaabsade ayaa markii ay is khilaafeen isaga iyo Jen. Cadde Muuse ee u laabtay Somaliland, wuxuuna duulaan kusoo qaaday magaalada Laas-caanood, halkaasoo xilligaas Puntland xukumeysay, waxaana magaaladu sidaas gacanta ugu gashay Somaliland oo ilaa hadda hesyata.
Mudadii Xaabsade ka tirsanaa maamulka Somaliland, wuxuu soo qabtay xilal ay kamid yihiin: Guddoomiyaha Golaha Wakiillada, Wasiirka Howlaha Guud iyo Guryeynta, Wasiirka Warfaafinta iyo La-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Doorashooyinka.
Meydka nin la gowracay oo saaka laga arkay Lafoole